Vaovao inona no hasehon'i Huawei ao amin'ny MWC 2019 | Androidsis
Inona no azontsika antenaina amin'ny Huawei ho an'ny MWC 2019?
Manomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2019 Febroary ny MWC 25 ary haharitra hatramin'ny 28 Febroary. Nanomboka niandalana ireo herinandro ireo, izay marika maro sahady no nanamafy ny fisiany tao Barcelona. Hatreto, marika toa LG, Energizer o Nokia dia nanamafy ny fisian'izy ireo tamin'io hetsika io. Ary Xiaomi koa dia hamela vaovao ho antsika amin'ity hetsika ity. Ankoatr'izay, Huawei dia iray amin'ireo nanamafy fa ho any Barcelona izy ireo.
Amin'ny tranga maro amin'ireo marika toa an'i Huawei tsy mila miandry ny 25 Febroary isika. Satria ny andro talohan'io, ny 24 febroary, nanomana hetsika fampisehoana izy ireo, izay ahafahantsika mianatra momba ny vaovaon'izy ireo amin'ity taona ity.
Roa herinandro lasa izay Huawei dia nanamafy ny fisiany tao amin'ny MWC 2019. Ny marika sinoa dia mikasa a hetsika fampisehoana amin'ny 24 Febroary, araka ny efa nambara tamin'ny alàlan'ny afisy. Tsy misy isalasalana, iray amin'ireo fampisehoana andrasana indrindra amin'ny hetsika telephony any Barcelona amin'ny faran'ity volana ity.
Ny fisalasalana ananan'ny maro no tena azontsika antenaina amin'ny Huawei amin'ny hetsika. Ny marika dia nanamafy ny fisiany ao. Fa inona avy ireo vokatra hoentinao amin'ny hetsika telephony lehibe indrindra eran-tany? Amin'izany dia efa manana angon-drakitra vitsivitsy izahay, izay hanampy anay hahalala izay antenaina amin'ny marika sinoa.
1 Finday avo lenta
2 Fitaovana hafa
3 Vaovao haja amin'ny MWC 2019?
Ao amin'ny afisy navoakan'ny marika sinoa nanambara ny fisiany tamina tambajotra, dia efa voaporofo izany afaka manantena finday finday avo lenta isika. Amin'ny sary dia azonao atao ny mahita ny fomba ahodiny, ankoatry ny fahitanao fa misy jiro amin'ny lafiny roa amin'ny efijery. Fantatra amam-bolana maro izay Huawei dia miasa amin'ny finday avo lenta izay manana fanohanana 5G koa, ka io no marika voalohany amin'ity lafiny ity. Zavatra izay Efa naseho tamin'ny faran'ny taona lasa iny.
Herinandro vitsivitsy lasa izay tafaporitsaka ny fandikana voalohany an'ity telefaona ity. Misaotra azy ireo isika afaka mahazo ny hevitr'ilay rafitra hampiasa ny marika sinoa amin'ity finday ity. Tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo finday avo lenta nantsoina hiteraka saika bebe kokoa amin'ny hetsika, ho fanampin'ny iray amin'ireo fironana lehibe amin'ity taona ity eo amin'ny tsenan'ny Finday.
5G dia ho iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ity fitaovana ity. Huawei dia iray amin'ireo marika tafiditra indrindra amin'ny fampandrosoana sy fampiharana ireo tambajotra 5G manerantany. Na dia misedra olana maro aza ny marika sinoa amin'ity fizotrany ity hatreto. Saingy ity maodely ity no ho voalohany amin'ny laharany manana an'io fifanarahana io.
Toa tsy izy irery no finday avo lenta hatolotr'i Huawei amin'ity hetsika ity. Haino aman-jery isan-karazany no milaza fa ho avy ny marika sinoa miaraka amin'ny smartphone isan-karazany amin'ity hetsika ity. Mazava fa manolo-tena mafy amin'ny MWC 2019 izy ireo, satria araka ny fanamarihan'ny haino aman-jery iraisam-pirenena, 15 tapitrisa euro eo ho eo no lany tamin'io toerana io sy fanaovana dokam-barotra mialoha ny hetsika any Barcelona. Ka manantena zavatra betsaka amin'izany izy ireo. Ambonin'ny zava-drehetra, sary iray nohatsaraina, noho ny olana sedrain'ireo volana maro lasa.
Tsy misy na inona na inona fantatra momba ireo maodely sisa izay asehon'i Huawei ao amin'ny MWC 2019. Ny haino aman-jery sasany dia nanipika fa afaka mahafantatra zavatra momba ny P30 ao isika, na dia ny fampisehoana an'ity avo lenta ity aza dia hatao amin'ny diabe, toy ny nitranga tamin'ny taon-dasa. Na dia toa hitantsika aza izany finday avo lenta izay efa vonona ho prototypes sasany. Ka ny marika dia te hamela anay amin'ny vaovao nomanin'izy ireo amin'ity taona ity.
Toa 5G no singa iraisan'ny ankamaroan'ireny finday avo lenta ireny. Tsy tokony hohadinointsika fa ny Huawei dia natolotra tamin'ny fiandohan'ny taona ny maodely vaovao 5G anao, izay azo antoka fa ho tafiditra ao amin'ireo fitaovana. Saingy tsy manana anarana na angon-drakitra momba ireo maodely vaovao ireo izahay izay haseho mandritra ny hetsika. Na dia afaka manantena telefaona maromaro aza isika amin'ny anjarany, miaraka amin'ny 5G ho endri-javatra manasaraka azy ireo. Ireo fitaovana ireo dia mety ho antonony sy sarany antonony.
Vaovao haja amin'ny MWC 2019?
Iray amin'ireo tsy fantatra lehibe io. Satria mahazatra fa raha misy fanatrehana amin'ny hetsika iray i Huawei dia misy ihany koa zava-baovao avy amin'ny Honor. Na dia amin'ny tranga misy aza ny MWC dia tsy izany foana no izy. Ohatra, Ny voninahitra dia tsy tao amin'ilay hetsika tany Barcelona tamin'ny taon-dasa. Tsy manana fampahalalana momba ny fanatrehany isika tamin'ny hetsika 2019 hatreto.
Ankoatr'izay, ny marika dia mbola tsy nanao fampandrenesana na mitady hiteraka hype manoloana ny fisiany ao amin'ny MWC 2019 toy ny marika hafa. Noho izany, raha tsy misy ny fanamafisana ofisialy, tsy manome ny fahatsapana fa hanana vaovao isika nataon'i Honor tamin'ny hetsika. Hifantoka amin'ny Huawei ny saina rehetra amin'ity tranga ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Inona no azontsika antenaina amin'ny Huawei ho an'ny MWC 2019?
Ny Xiaomi Mi 9 dia manana bokotra Mpanampy Google
Diamondra vaovao ARCHOS: smartphone vaovao misy fakan-tsary azo averina